Lipicard (လီပီကဒ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Lipicard (လီပီကဒ်)
Lipicard (လီပီကဒ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Lipicard (လီပီကဒ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Lipicard (လီပီကဒ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
LIPICARD® (FENOFIBRATE) လီပီကဒ်သည် အဓိကအားဖြင့် နှလုံးတွင်သွေးပမာဏ လုံလောက်စွာမရရှိသောကြောင့် နှလုံးအောင့်ခြင်းကို သက်သာစေရန် သုံးသော ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ကို အထူးအစားအစာအနေနှင့် သုံးပြီး သွေးထဲတွင် ထရိုင်ဂရစ်စရိုက် အဆီဓါတ်များနေသော သူများ၊ ကောင်းသော အဆီဓါတ်(HDL) ကိုများစေရန် နှင့်မကောင်းသော အဆီဓါတ် (LDL)ကို လျှော့ချရန် သုံးပါသည်။ ယင်းသည် သွေးထဲတွင်ရှိသော အဆီများကို ပျော်စေခြင်းဖြင့် သွေးတွင်းအဆီများကို ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။
Lipicard ကို အခြားသောနည်းများဖြင့် အဆီချခြင်းများနှင့် မအောင်မြင်မှသာ သုံးပါသည်။ အစားအသောက်ထိန်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းများဖြင့် သွေးတွင်းအဆီများကို လျော့နည်းစေရန် ကြိုးစားသင့်သည်။
ထို့အပြင် ဆီးချိုရောဂါ၊ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောဂါနှင့် အရက်စွဲခြင်းကဲ့သို့သော အချက်များကို ကုသနိုင်ပါကလည်း သွေးတွင်းအဆီများကို လျော့နည်းစေသည့်နည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
အချို့သူများတွင် သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များစေသော ဆေးများကို ဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း အဆီကျသွားစေပါသည်။ ဥပမာ အချို့သော ဆီးဆေးများနှင့် Beta Blockers ဆေးများသည် သွေးထဲတွင် ထရိုင်ဂရစ်စရိုက် အဆီဓါတ်ကို မြင့်တက်စေပါသည်။ oestrogen ဟော်မုန်းဆေးများသည်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
Lipicard (လီပီကဒ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ကို အစာနှင့်သောက်ပါ။ ရေ တဖန်ခွက်နှင့်သောက်ပါ။ ဆေးပမာဏသည် လူနာ၏ အခြေအနေနှင့် ဆေးဝါးများကို တုန့်ပြန်မှုအပေါ် မူတည်သောကြောင့် ဆရာဝန်အားမေးမြန်းပါ။
ဆေးကို အလုံးလိုက်မျိုချပါ။ မဝါးပါနှင့် မချေပါနှင့်။ သင်သည်နေကောင်းနေသော်လည်း ဆရာဝန်ကို မပြောဘဲ ဆေးဖြတ်ခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ သွေးတွင်းအဆီဓါတ်များခြင်းကြောင့် နေမကောင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာများ ပြလေ့မရှိပါ။
Lipicard (လီပီကဒ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ LIPICARD® (FENOFIBRATE) ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Lipicard (လီပီကဒ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Lipicard နှင့်ဓါတ်မတည့်လျှင် မသောက်ပါနှင့်။
Lipicard သည် သည်းခြေကျောက်ဖြစ်စေသောကြောင့် သင့်တွင်သည်းခြေကျောက်ဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်က ဆေးဖြတ်လိမ့်မည်။ ထို့ပြင် သင့် အသည်းကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်သော စစ်ဆေးမှုများ၊ သွေးစစ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင်မူ Lipicard နှင့်ပက်သက်ပြီး တိကျသော စမ်းသပ်မှုမရှိပါ။ သို့သော် တိရိစ္ဆာန်များတွင်မူ ဆေးပမာဏများစွာသောက်ခြင်းသည် အန ္တရာယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။
သင်သည် ကလေးယူရန်စီစဉ်ထားလျှင် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် သင့်ဆရာဝန်နှင့် Lipicard သောက်သင့် မသောက်သင့် တိုင်ပင်ပါ။
Lipicard ကို နို့တိုက်နေသော မိခင်များ မသောက်သင့်ပါ။ မသောက်မနေရ အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့လျှင် သင့်ကလေးကို နို့ဖြတ်သင့်သည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Lipicard (လီပီကဒ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။)
Lipicard (လီပီကဒ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Lipicard သည် အောက်ပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြစ်စေပါသည်။
အောက်ပါ ပိုဆိုးသော ဆိုးကျိုးများခံစားရပါက ဆရာဝန်နှင့် ချက်ချင်း ပြသရမည်ဖြစ်သည်။
ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်း၊ အားနဲခြင်း
ရောဂါပိုးဝင်သော လက္ခဏာများ ခံစားရခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Lipicard (လီပီကဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့် LIPICARD® (FENOFIBRATE) သည် သွေးကျဲဆေးများ၊ Cyclosporin, Statin သွေးတွင်းအဆီကျဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Lipicard (လီပီကဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
LIPICARD® (FENOFIBRATE) က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Lipicard (လီပီကဒ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အသည်း နှင့် သည်းခြေကျောက်တည်ရောဂါ
ပြင်းထန်သော ကျောက်ကပ်ရောဂါများရှိလျှင် ဆေးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်စေပါသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Lipicard (လီပီကဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သွေးတွင်း အဆီဓါတ်များနေသူများနှင့် ထရိုင်ဂရစ်စရိုက် အဆီဓါတ်ပါများနေသော လူကြီးများအတွက် ပထမဦးစွာ တနေ့လျှင် ၁၆၀ မီလီဂရမ် သတ်မှတ်ထားသည်။
ထရိုင်ဂရစ်စရိုက် အဆီဓါတ်ပါများနေသူများအတွက် ပထမဦးစွာ တနေ့လျှင် ၆၇ မီလီဂရမ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ဆေးသောက်နေရင်း သင့်သွေးတွင်း ထရိုင်ဂရစ်စရိုက်သည် မကျသွားလျှင် ၄ ပတ် မှ ၈ ပတ်ကြာလျှင် သင့်ဆရာဝန်က ဆေးပမာဏတိုးပေးလိမ့်မည်။ အများဆုံးသောက်သုံးနိုင်သော ဆေးပမာဏမှာ တနေ့လျှင် ၁၆၀ မီလီဂရမ် သတ်မှတ်ထားသည်။
အသက်ကြီးသူများနှင့် ကျောက်ကပ် မကောင်းသူများအတွက် တနေ့လျှင် ၅၄ မီလီဂရမ် စသောက်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်။
ကလေးတွေအတွက် Lipicard (လီပီကဒ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Lipicard (လီပီကဒ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၁၆၀ မီလီဂရမ် ဆေးလုံး
LIPICARD® (FENOFIBRATE) ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
နှလုံးကျန်းမာဖို့ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား နေကြစို့